Umsuka wegama elithi Kilimanjaro - Afrikhepri Fondation
I-Mount Kilimanjaro (5 895 m)
Lyena Kilimanjaro noma Kilimanjaro yintaba etholakala enyakatho-mpumalanga yeTanzania futhi yakhiwa izintaba-mlilo ezintathu ezingapheli: i-Shira entshonalanga, ifinyelela kumamitha angama-3 ngaphezulu kwezinga lolwandle, iMawenzi empumalanga, ikhuphukela ku Amamitha ayi-962 ngaphezu kogu lolwandle, neKibo, okuyindawo yakamuva kakhulu yokwakheka komhlaba, ebekwe phakathi kwalaba abanye ababili futhi i-Uhuru yabo ephakeme ngamamitha angama-5 ngaphezu kwezinga lolwandle indawo ephakeme kunazo zonke e-Afrika.
Igama elisetshenziselwa ukubhekisela entabeni lonke libizwa ngokuthi "Kilimanjaro" ngesiFulentshi naseKilimanjaro ngesiNgisi.
Ibizwa nangokuthi i-Ol Doinyo Oibor ngesi-maa, kungaba "yi-White Mountain" noma "iSparkling Mountain". Igama laso lamukelwa ngonyaka we-1860 kanti livela kwiSwahili Kilima Njaro. I- "Kilimanjaro" kwakuyisihloko sezifundo ezenziwa phambili, uJohann Ludwig Krapf wayibona njenge "Mountain of Splendor" ngaphandle kwencazelo eqhubekayo. Ngo-1884, uGustav Adolf Fischer uqinisekisa ukuthi uNjaro uyidemoni lamakhaza, umbono owathathwa nguHans Meyer ngesikhathi ekhuphuka ngo-1889, kepha uNjaro waziwa kuphela kubantu abahlala ogwini hhayi kulabo abahlala ezweni , owayekholelwa nakwimimoya yokusizakala kuphela. UJoseph Thomson waba ngowokuqala ukucabanga, ngonyaka we-1885, ukuthi kusho ukuthi "iSparkling Mountain". Uma i-kilima encishisiwe isho "igquma", "intaba encane", lo mbono awuchazi ukuthi kungani igama elithi mlima lingasetshenziselwa ukuqamba ngendlela engafanele "intaba" uma kungengenxa yezizathu zomzwelo noma ukusonteka. INjaro isho ukuthi mhlophe, luster ngesiSwahili. Ngaphezu kwalokho, ku-maa, ngaro noma ngare kusho amanzi noma iziphethu. Kepha i-jaro ingakhelela ikharavani ku-kichagga kanti enye i-theory iphakamisa amagama athi kilmanare / kilemanjaare, kilelemanjaare noma i-kileajao / kilemanyaro enencazelo ngokulandelana ngokuthi "onqoba inyoni" noma "ingwe" noma "umhambi." Kodwa-ke, leli gama belingeke lingeniswe kuze kube maphakathi nekhulu le-XNUMX phakathi kwabakwaWachagga ababesebenzisa igama ngalinye kweziqongo ezaziwa yibo ngokwahlukana, okwenza lencazelo ichronistic.
IKilimanjaro yakhiwa iziqongo ezintathu eziyinhloko okuyi-Shira, Mawenzi (ngesi-kichagga Kimawenze noma ngeMavenge esisho ukuthi “Split summit” ngesiFulentshi, lokhu kubukeka njengenganekwane yasendaweni) noKibo (eKipoo noma kuKiboo kichagga okusho ukuthi "kubonisiwe" ngesiFulentshi ngenxa yedwala elimnyama eliphuma eqhweni laphakade, elibizwa nangokuthi iKyamwi, "elikhanyayo"). Lezi zindawo zokukhosela ziveza indawo ephezulu kunazo zonke, igama le-Uhuru (igama lesiSwahili elisho "inkululeko"). Kwabhapathizwa uKaiser-Wilhelm-Spitze kusuka ngonyaka we-1889 kuya kowe-1918 ukuhlonipha uWilliam II waseGermany kulandela ukuthi ikoloni laseGerman East Africa lisayine izivumelwano phakathi kukaCarl Petros nezinduna zendawo, kuze kube yilapho kudlula umhlangano ITanganyika ngaphansi kokuphatha kweBritish.
Ngokomcwaningi uPierre Nillon, umsuka waleli gama uzobhekisa ku-mdw-nṯr:
“Ngokuphathelene“ noFaro waseGibithe ”, siyazi ukuthi amaGibhithe asendulo ayesuka esifundeni samaGreat Lakes, okuwukuphela kwesifunda lapho abantu babengavela khona, ngoba ngaleso sikhathi sithola lapho izinto ezi-4 zomkhathi waseGibhithe : I-Geb efanekisela umhlaba owomile (uGab = ukumba umhlaba eWolof), iTefnut ifanekisela amanzi (Teflit = spitting in Wolof), Nut efanekisela ukushisa (Nit = ukukhanya, ukukhanyisa kuWolof), noShou efanekisela umoya (uSoy = ukushaya kuFulan).
Lesi isizathu esenza ukuthi ngekhulu lesi-5 B.C.E. UJ.-C, isazi-mlando uHerodotus waseHalicarnassus (Umlando II, 2) wathi kithi: "Ngaphambi kokubusa kwePsymetica, abaseGibhithe babezikholelwa ukuthi bangabantu abadala kakhulu emhlabeni". Ngempela, ukuthi bavela kulesi sifunda, abaseGibhithe, njengabo bonke abamnyama, bangazithatha njengabantu abadala kakhulu emhlabeni. Sibonile ukuthi abaseGibhithe lasendulo baqamba lesi sifunda ngokuthi iTo Natjaro okusho iZwe LikaNkulunkulu. Kodwa-ke, kungathi ngengozi kungenzeka kulesisifunda ukuthi sinokudalulwa kweKilimanjaro kweKilima Natjaro okusho UMBONO WEZIMU, ngesiSwahili, ulimi lwesiBantu; sizokwengeza ukuthi kunengqondo ukuthi lapho ikhona iNtaba kaNkulunkulu, izwe likaNkulunkulu. ”
(I-1) Uhlelo lwe-Global Volcanism Programme - Izilinganiso ze-Kilimanjaro
(2) "Kilima-Njaro", i-Nuttall Encyclopædia, i-1907
(3) JA Hutchinson, The Meaning of Kilimanjaro
(4) Marie-Laure Montlahuc, uGerard Philippson, Kilimanjaro: intaba, inkumbulo, isimanje, op. cit, amakhasi 81-93
(5) UFiliphu Briggs, Isiqondiso seTanzania, i-2e Edition, i-Bradt Guides, i-1996
(6) U-Pierre Nillon, i-True Bible kaMose, p.77-78, u-Ed Anibwe.
(7) UHerodotus weHalicarnassus (Umlando II, 2)
Inothi elengeziwe lolimi:
/ klm / = umqhele (Kubheke isichazamazwi se-CiKam-Coptic-Luba, i-p.133)